ကိုငှက် နဲ့ညီညီသွင်…။ (ညီညီစံ ရေးသည်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » ကိုငှက် နဲ့ညီညီသွင်…။ (ညီညီစံ ရေးသည်)	12
ကိုငှက် နဲ့ညီညီသွင်…။ (ညီညီစံ ရေးသည်)
Posted by black chaw on Aug 9, 2016 in Entertainment, Music | 12 comments
ကိုငှက် နဲ့ ညီညီသွင် ဟာ
တပူးပူး တတွဲတွဲ ရှိခဲ့ကြပေမယ့်
ညီညီသွင့် သီချင်းကို ကိုငှက် တခါမှ မဆိုဖူးပါဘူး။
ရေးနိုင်၊ ဆိုနိုင်၊ ဖန်တီးနိုင်သူမို့
တော်ရုံတန်ရုံ သူများ သီချင်းကို ဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။
ညီညီသွင်ကလည်း သူ့မှာ ရေးထားတဲ့
တခါမှ မပြောဘူး၊ မတောင်းဆိုဘူးတာ ကျနော် သတိထားမိခဲ့တယ်။
ဒါကလည်း သီချင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့၊
ညီညီသွင်မှာ ရှိတဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့
အနုပညာမာန စိတ်လေးကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် တနေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ စုနေတဲ့
အခန်းလေး တခုကို ကျနော်နဲ့အတူ ညီညီသွင်ရော၊
ကိုငှက်ပါ ရောက်သွားကြရင်း နားနားနေနေ နေကြတဲ့ အချိန်…၊
ညီညီသွင်က သူ ရေးလက်စ သီချင်းလေးတပုဒ်ကို
ဂစ်တာလေးနဲ့ ညည်းပြီး ဆက်ရေးဖို့ သီဆိုကြည့်နေ ပါတယ်။
ကိုငှက်က မလှမ်း မကမ်းက အိပ်ရာတခုပေါ် လဲလျောင်းရင်း
ယုံကြည်ရဲ့လား ကလေး . . . ”
ညီညီသွင်က အဲဒီလို သူရေးလက်စ သီချင်းလေး ကို
ကိုငှက် ခေါင်းထောင်နားစွင့် လိုက်ပြီး
“ညီညီ အဲဒါ ခင်ဗျားသီချင်းလား”
ကျနော် အခုမှ စရေးနေတုန်း၊
လို့ ပြန်ဖြေ ပါတယ်။
ကိုငှက်ဆီက အသံနက်နက်တခု ထွက်လာ ပါတယ်။
“ညီညီ အဲဒီသီချင်း ရေးပြီးသွားရင်
ကျနော် ဆိုမယ်၊ ကျနော့်ကိုပေးပါ”
“ကလေးရေ” လို့ အမည်ရတဲ့
JAZZ သီချင်း တပုဒ်ကို ကိုငှက် ပထမဆုံး
သီဆိုဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အမှတ်တရ အပိုင်းအစလေး ပါပဲ။
ကိုငှက်က “ကလေးရေ” သီချင်းကို
သူ့ရဲ့ “သက်ငြိမ်” စီးရီးထဲမှာ တလေးတစား သီဆိုခဲ့ ပါတယ်။
သီချင်းကောင်း တပုဒ်ရဲ့ အတိမ် အနက်ကို
nozomi says: မသေစေချင် သေးတဲ့ထဲ ကိုငှက် ထိပ်ဆုံး က ပါတယ် ဗျာ
အစားထိုးလို့ မရနိုင်သော အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပေါ့
kai says: မြန်မာပြည်မယ်.. JAZZ ကို ဆက်လုပ်.. ဆက်ဆိုနေကြသူတွေများ.. ရှိသလား..။
JAZZ က.. ဒီမှာကျ.. လူမဲတွေ.. အသံကြီးကြီးလေးလေးကြီးတွေနဲ့.. ဆိုကြတာကို ကြိုက်တာမို့.. ကိုငှက်ဆိုထားတာတွေ.. သိပ်တော့ ခံစားလို့မမိ…။ မထိ..။
ကြိုက်တာလည်း ရှိ…၊ မကြိုက်တာလည်း ရှိပေါ့…။
ကိုငှက်ဆိုထားတဲ့ JAZZ သီချင်းလေးတွေကိုတော့
မြန်မာ နားမို့လားတော့ မသိပါဘူးဗျာ…။
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ…။
ဦးကျောက်ခဲ says: ညီညီသွင်ရဲ့ “ကလေး” က အိမ်ထောင်ကျပြီး နိုင်ငံခြားမှာ… ဂီတကဝေ ကိုငှက်လည်း နတ်ထီးစံသွားတာ လာမည့် ဆန်းဒေးဆို ၁၂-နှစ်ပြည့်ပြီ…
ဩဂတ်စ်ဆိုတာ ကြယ်တွေချွေတဲ့လ ၊ ကြယ်သစ်တွေမွေးတဲ့လ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့ဟာ ကိုငှက် ကွယ်လွန်တဲ့ နေ့ပါ…။
တတ်နိုင်သလောက် ကိုငှက် နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ
အမှတ်တရ သဘော ပြန်တင်နေတာပါ ကိုကျောက်ရေ…။
ဂျစ်စူ says: ကိုငှက် အသံကိုမီအောင် ဆိုနိုင်တာ ကိုဘလက်တစ်ယောက်ပဲစိတယ်
black chaw says: @ ဂျစ်စူ ;
အသာလုပ်ပါ ဂျစ်စူ ရယ်…။
မမချွိ says: အဲဒီ သီချင်း သိသလိုလို မသိသလိုလို။ ကလေး သီချင်းတွေက ရောနေပြီ။
ညီထွတ်မှာရော အဲလက်(စ) မှာ ရော ကလေး သီချင်း ရှိတယ်။
black chaw says: @ မမချွိ ;
ကလေး ချင်း တူပေမယ့်
ညီထွဋ် ရဲ့ ကလေး နဲ့
အဲလက်စ် ရဲ့ ကလေး က
တော်တော် ကြီး ဝေးတယ်လို့
Thint Aye Yeik says: အခုတလော… ဦးငှက်သီချင်းတွေ… အရမ်း နားထောင်ဖြစ်လာတယ်ဗျို့…။
အထူးသဖြင့်…အခါလွန်မိုး…နဲ့.. ကြယ်တွေ စုံတဲ့ည…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ Thint Aye Yeik ;
ကိုငှက် သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်လာတယ် ဆိုလို့
အခါလွန်မိုး ရော ကြယ်တွေစုံတဲ့ည ရော